केयूमा समसामयिक अध्ययन केन्द्र स्थापना
२०७८ चैत ३० बुधबार ०६:४१:००
काठमाडौं विश्वविद्यालय–नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र (केयू–एनसिसिएस) स्थापना भएको छ । सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य समाज विज्ञानको विधामा अध्ययन अनुसन्धानलाई अघि बढाउने गरी अध्ययन केन्द्र सुरु भएको हो ।
ललितपुरको हात्तीवनस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टस्मा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले केन्द्रको उद्घाटन गरे । समाजका सीमान्तकृत खासगरी दलितहरूको उत्थानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक चिन्तक डा.भीमराव अम्बेडकरको १३१औँ जन्मजयन्तीको सन्दर्भ पारेर यादवले केयू–एनसिसिएसको उद्घाटन गरेका हुन् ।
उनले संविधानबारे अम्बेडकर अडानझैँ दस्ताबेज आफैँमा पूर्ण नभए पनि अपनत्व दिएर जान सके समाज र देशका पक्षमा काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले नयाँ केन्द्रले समाजका समसामयिक विषय खासगरी दलित र अल्पसंख्यकका विषयलाई अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपालका चर्चित राजनीतिशास्त्रीहरूद्वारा नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । जसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिकलगायतका विषयमा थुप्रै महत्वपूर्ण अध्ययन गरेको थियो । संस्थाका संस्थापक प्रा.डा.लोकराज बरालले आर्थिकलगायतका कारणले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको र संस्थालाई बन्द गर्नुभन्दा विश्वविद्यालयलाई जिम्मा लगाएको र यसबाट धरैले लाभ लिन सक्ने बताए ।
तत्कालीन संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदन, पुस्तकलगायत सामग्री काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले समसामयिक अध्ययन केन्द्र स्कुल अफ आट्र्सअन्तर्गत रहेपछि सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्न सक्ने बताए । केन्द्र विश्वविद्यालयको अंग बनेपछि डा. बराल मानार्थ अध्यक्ष र डा.उद्धव प्याकुरेल सदस्य सचिव रहेको सञ्चालक समितिले कार्यविधि बनाई अघि बढ्ने जनाएको छ ।
केयूमा खुल्यो ‘मास्टर्स इन मिडिया स्टडिज’ कार्यक्रम
केयू र भारतको आइआइटीबीच स्नातकोत्तर तहमा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता
केयूका विद्यार्थीद्वारा विद्यालयमा शैक्षिक, प्राविधिक सामग्री हस्तान्तरण
वञ्चित विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी हुन नोबेलको आग्रह, आयोग र केयूसँगको सहमति पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता
नेपालमैत्री शिक्षामा राष्ट्रपतिको चासो, केयूका पदाधिकारीसँग छलफल